ILexio: Shintsha idatha ibe uLimi Lwemvelo | Martech Zone
ILexio: Shintsha idatha ibe uLimi Lwemvelo
ULwesine, April 2, 2020 ULwesine, April 2, 2020 Douglas Karr
Lexio yipulatifomu yokuxoxa izindaba esiza wena neqembu lakho ukuthola udaba olungemuva kwedatha yebhizinisi lakho - ukuze nisebenzisane, ekhasini elifanayo, noma yikuphi. ILexio ihlaziya imininingwane yakho ikutshele wena neqembu lakho lokho odinga ukukwazi. Akunasidingo sokumba ngamadeshibhodi noma ngokubhala ngaphezulu kwamaspredishithi.
Cabanga Lexio njengokukhishwa kwezindaba zebhizinisi lakho eselivele likwazi okubalulekile kuwe. Vele uxhume kumthombo wedatha ovamile, bese uLexio abhale ngokushesha amaqiniso abaluleke kakhulu ngebhizinisi lakho ngesiNgisi esicacile. Chitha isikhathi esincane ulwa nedatha, kanye nesikhathi esiningi sokukhulisa imali.
I-Lexio ye-Salesforce Sales Cloud
Lexio njengamanje ihlangana ngqo ne-Salesforce Sales Cloud cishe ngaso leso sikhathi. Mane ufake iziqinisekiso kumthombo wakho wedatha, linda imizuzu embalwa, bese uqala ukufunda.
Thola izindaba zakho zedatha efonini yakho, kwi-laptop yakho, noma ngaphakathi kwamathuluzi akho owathandayo.
Izindaba ezilula, eziqondakala kalula, nezingachemi ngemininingwane yakho.
Ixhuma kwimithombo yedatha ejwayelekile ngemizuzu enokulungiswa okunguziro.
Funda kabanzi ngeLexio futhi uthole izindaba zakho zedatha. Ufuna ukubhala ngemininingwane ehlukile kunemithombo engenhla? Ayikho inkinga. Hlela umhlangano futhi sizosebenzisana nawe ukwenza lokho kwenzeke.
Cela i-Lexio Demo
Lexio yeGoogle Analytics
ILexio inokuhlanganiswa neGoogle Analytics, ungabona idemo yomkhiqizo lapha
Idemo Lokusebenzisana Lexio for Google Analytics
Ukuhlanganiswa kweLexio kweMarketo, I-Hubspot, I-Salesforce Service Cloud, Izikhangiso zeGoogle, iMicrosoft Dynamics, iZenDesk, iMixPanel, ne-Oracle zisondele.
Tags: Ama-AnalyticsI-google analyticslexioisayensi elandisayoulimi lwemveloOraclequill bahlanganyeleifu lokuthengisasalesforceifu lokuthengisa labasebenzi
Symbl.ai: Ingxenyekazi Yonjiniyela Yobungcweti Bokuxoxa